Nhau - Giredhi 100 chiwanikwa chesimbi cheni
Grade 100 chiwanikwa simbi cheni / vachisimudza cheni:
Giredhi 100 cheni yakanyatso gadzirirwa izvo zvakaomarara zvinodiwa pamusoro wekusimudza mafomu Giredhi 100 Chain ndeye Premium mhando yepamusoro simba yesimbi yesimbi. Giredhi 100 Chain ine 20 muzana inowedzera mukushanda mutoro muganho zvichienzaniswa necheni yakafanana saizi muGrade 80. Izvi zvinokutendera iwe kudzikisa saizi yeketani zvichienderana nebasa rinoshanda rinodiwa. Grade 100 ngetani dzinonziwo Giredhi 10, System 10, Spectrum 10. Giredhi 100 Chain IS yakatenderwa kukwidziridzwa pamusoro.
Yese yedu yeGiredhi 100 cheni ndeye 100% pasi peChipupuriro Chakaedzwa kusvika kaviri muyero wekutakura unoshanda. Iko kushoma kwekuzorora simba kwakapetwa kana iko kushanda mutoro muganho. Yedu Giredhi 100 chiwanikwa Simbi Chain inosangana neese aripo OSHA, Hurumende, NACM uye ASTM zvichemo zvinodiwa.
Kushanda Mutoro Limit (WLL): (yakatarwa kugona) Ndiyo yekumusoro inoshanda mutoro iyo inofanirwa kuiswa mukunetsana kwakananga kune isina kukuvara yakatwasuka kureba kwetani.
Chipupuriro Bvunzo: (yekugadzira bvunzo simba) iri izwi rinoratidzira hushoma tensile simba iro rakaiswa kune cheni pasi pesimba rinoramba richiwedzera mukutenderera kwakananga panguva yekugadzira. Iyi mitoro iri kugadzira kutendeka bvunzo uye haizoshandiswe senzira yekushandira kana dhizaini dhizaini.
Minimum Breaking Force: Iwo mashoma simba pane iyo cheni panguva yekugadzira yawanikwa nekuyedza kutyora kana simba rinogara richiwedzera richiiswa mukukonana kwakananga. Kuputsa simba rehunhu hakuvimbisi kuti ese mativi emaketani anotsungirira iyi mitoro. Bvunzo iyi ndeyekugadzwa kwekugamuchira bvunzo bvunzo uye HAIZODI kushandiswa senzira yekushandira uye dhizaini yekugadzira.
Pamusoro peKusimudza: Maitiro ekusimudza ayo anokwidziridza mutoro wakasununguka wakamira panzvimbo yakadonhedza mutoro unopa mukana wekukuvara kwemuviri kana kukuvara kwePfuma.